I-Sun City Cabanas Hhotela - Ukukhwishiza - Igalofu, Izilwane
Izinto zokwenza e-Cabanas Hotel
E-Sun City Cabanas Hotel, ungadlala i-tennis kanye ne-squash, ujabulele ukuhlukunyezwa, ukuthola izindlela zemvelo, uhlu alupheli. Izingane zingajabula kumfula we-Wave no-Kamp Kwena ohlinzeka ngemfundo yemfundo nokuzijabulisa izingane.
Indwendwe e-The Cabanas inezakhiwo zendawo yonke yaseSun City, okumele ukhethe uma kuziwa emisebenzini yangaphandle. Kukhona isiGodi esimangalisayo sama-Waves, esinye sezihloko zamanzi ezimangalisayo kakhulu emhlabeni-amapaki, iWashworld, okuyiyona emfushane ehamba emagqumeni akwaCabanas lapho kune-jet skiing, ukuphefumula umoya, ukuhamba kwamanzi kanye nolunye uhlobo lwezinye izindawo zokuhambisa amanzi.
Umgadli wegalofu angaqala uhambo olushukumisayo lwegalofu ngezigaba ezimbili zegalofu ezihlukene kakhulu ezibandakanya i-Gary Player Country Club - ikhaya leNedbank Million Dollar Golf Challenge yonyaka nonyaka we-Lost City Golf Course.
Izivakashi zingadla ukudla okunezinhlobonhlobo zokudlela ezinhlobonhlobo zokudlela ngaphakathi kwe-Sun City resort futhi uphuze iziphuzo eziqabulayo ebhasini.
I-Pilanesberg National Park iseduze ne-Sun City yokuhlala yakho futhi ikunikeza ithuba lokulandelela inqwaba yemidlalo kuhlanganise ne-Big Five
Dala izinkumbulo zomndeni eziphelele emzini wakho we-Sun City nomndeni womndeni ohlangene. Indawo yokuvakasha iyisikhungo sezokuzijabulisa, esinezinkundla zokudlala ukuze izingane zakho zijabule. Vakashela izilwane eziseduze zezilwane nezilwane ezidla inyama nezinye izilwane ezincane. Ngaphandle kwalokho, vakashela iJard Gardens ngokuxhumana okuthakazelisayo nengwenya yengane.
Maze woMuzi Olahlekile